Q एक केटी लिङ्ग नछिराईकन नै गर्भवती हुन सक्छिन् ? उनको योनि बाहिर छुवाउदाँ मात्रै पनि ।
शुक्राणुहरू योनिमा प्रवेश गर्दा मात्रै एउटी केटी गर्भवती हुन सक्छिन् । तर तपाईं उनको योनि खुल्ने ठाउँ नजिकै विर्यपात गर्दा पनि यस्तो हुन सक्छ । कृपया कुनै अनावश्यक जोखिम नलिनुहोस् । कि कन्डोमको प्रयोग गर्नुहोस् कि सकेसम्म योनिबाट टाढा रहनुहोस् ।
Q नमस्ते, मेरो छोरो ५ वर्षको भएको छ । लगभग एक वर्ष अगाडि, उसको कानको संक्रमणको लागि उसको कानमा एडेनोइडेक्टेमी र कानको जाली वा ग्रोमेट हालेको थिए । अब एउटा कानको जाली बाहिर आउँदैछ र उ कान दुखेको गुनासो गर्दैछौं । तपाईं उसलाई दोहोरो शल्यक्रिया गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ ?
यदि कानको जाली वा ग्रोमेट बाहिर आउँदैछ र उसले कान दुखेको गुनासो गरिरहेको छ भने, त्यहाँ पुनः ग्रोमेट हाल्नुपर्दछ । यसमा म तपाईंलाई आफ्नो ई.एन.टी. चिकित्सकको भएको ठाउँमा पुन: भ्रमण गर्नु पर्दछ, जसले तपाईंको छोराको छोराको अपरेसन गरेको थियो । किनभने उहाँ तपाईंलाई सल्लाह दिनको लागि राम्रो स्थानमा हुनुहुन्छ र थप व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ ।